«Raharaha kidnapping Toamasina» : avy aiza ireo fitaovam-piadiana ? Mihisatra ny fanadihadiana | NewsMada
«Raharaha kidnapping Toamasina» : avy aiza ireo fitaovam-piadiana ? Mihisatra ny fanadihadiana
Roa volana latsaka eo ho eo, taorian’ny nahatrarana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ; basy Kalachnikov miisa efatra, bala 119, ary «grenade offensive» tamin’ireo mpanao kidnapping, tany Toamasina, mbola tsy fantatra ny marina ny amin’ny fiaviany.
Raha somary miroso tsikelikely ny famotorana, mikasika ireo olona voarohirohy amin’ireny raharaha kidnapping, tany Toamasina farany teo, ireny, mihisatra kosa ny fanadihadiana momba ny fiavian’ireo fitaovam-piadiana mahery vaika, tratra tao an-tranon’ireo jiolahy mpaka an-keriny. Anisan’izany ireo basy Kalachnikov miisa efatra, bala 119, ary «grenade offensive», izay naseho ny mpanao gazety, tetsy amin’ny BC Anosy, roa volana lasa izay. Tamin’izay fotoana izay, nilaza ireo polisy mpanao famotorana, ao amin’ny BC, fa efa nandefa taratasy fangatahana fanadihadiana momba ny fiavian’ireo fitaovam-piadiana ireo. Voalaza aza fa efa fantatra ny nomeraon’ireo basy, sy bala ary grenady ireo.
Hatramin’izao anefa, toa mihantona eo ny raharaha. Tsy hita izay tohiny. Tsiahivina, fa na ny tonia mpampanoa lalàna any Toamasina aza, efa nanipy teny mialoha ka nanambara fa « sao lazaina indray hoe fitaovam-piadiana tamin’ny andron’ny krizy 2002,… ireny ». Manaramarina izany anefa ny vaovao azo farany fa basy very an’ny prezidansa tamin’ny taona 2002 ireo. Voalazan’ny loharanom-baovao fa fantatra tamin’ny alalan’ireo laharan’ny fitaovam-piadiana sy ny bala izany.
Inona, araka izany, no tena marina ? Inona ny vato misakana amin’ny fanadihadiana ? Mitodika amin’ireo tompon’andraikitra, mpanao fanadihadiana eny amin’ny minisiteran’ny fiarovana ny mason’ny rehetra. Miandry ny valin’izany rahateo koa ireo polisin’ny BC mpanao famotorana.
Mbola maro ny tsy hita
Araka ny fanazavana azo tamin’ny mpitandro filaminana iray, mbola maro ireo fitaovam-piadiana very tamin’ny taona 2002 no tsy tafaverina. “Anjatony maro ny basy sy bala, grenady very tamin’izany fotoana izany, tao amin’ny prezidansa rehefa niala ny filoha teo aloha sy ny nandimby azy. Mbola maro ireo no miparitaka any”, hoy ny fanazavana.
Midika ve izany fa ireo fitaovana voalaza fa mbola tsy hita ireo no ampiasain’ny jiolahy ankehitriny, tahaka ireo nampiasain’ny mpanao kidnapping tokoa? 14 taona aty aoriana, mbola basy tamin’izany andro izany ny am-pelatanan’ny jiolahy. Tsy nisy ny fanadihadiana sy fitadiavana ny very tao anatin’izany taona maro izay? Manampy trotraka ny basy mbola ampanofain’ny mpitandro filaminana sasany. Miandry izay vaovao ofisialy momba ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo ny rehetra.